I-Adut Akech kunye neBali likaRuntown loThandekayo linokuGqibela ukuRhawuzelelwa ngeFairytale
Jkutsha nje, supermodel yaseSudan-Australia, UAdut Akech, ubekho kwiindaba emva kokubonakala ngathi uyamdubula wadubula kwi-Instagram ku-Afro-pop waseNigeria, Ukubaleka.
Kwangoko kule nyanga, kwiiveki ezimbalwa emva kokuba siqale ukubabona badlala ngotshintsho, uAdut wabelana ngevidiyo kunye noRuntown ethatha indlela ehamba kunye kumabali wakhe e-Instagram. Kubalandeli kwimithombo yeendaba zentlalo, yayiyintshukumo ekhawulezayo.
-Odion Bello-Audu (@ odlanky30) Julayi 7, 2020
Ngokukhawuleza yividiyo entsha ethi Akech ekwabelwana ngayo ngamabali akhe e-Instagram ngoLwesithathu, ebonisa isupermodel ikhwaza ngovuyo nabahlobo bayo kwaye benxibe umsesane omkhulu wedayimani.
Imvumi yaseNigeria #Runtown kuthiwa ubambisene nentombi yakhe yaseSudan #AdutAkech. URuntown waya kwibali lakhe le-Insta ukuze abelane nentombi yakhe yase-Australia-eSudan- ngelixa uAstylis wabonakalisa ikhonkco ledayimani ngomnwe wakhe.
Iposi elibiwe I-IgommentSection (TCS) (@the_commentsection) kwi Julayi 22, 2020 kwi-1: 02am PDT
Kungekudala emva koko, uRuntown ngokwakhe wabelana ngesithombe sabo bobabini kumabali akhe e-Instagram kunye no-Akech enxibe umsesane omnye. Imithombo kulawulo lweemvumi iqinisekisile ukuba imvumi ayizibandakanyi nokuba umsesane kuphela.
Apho iqale khona
Malunga ne-Adut Akech
Le supermodel eneminyaka engama-20 ubudala iye yaphula izithintelo ezininzi ebomini bayo. Ngo-2019, waphumelela imodeli ye-BFA ye-BFA yebhaso lonyaka, imodeli yevoti yoRhwebo yonyaka, kwaye wavela kuluhlu lwe-Magazine oluphezulu lwe-100 Olulandelayo.
Usapho luka-Akech (kubandakanya umama wakhe kunye nabantakwabo abahlanu) bafudukela e-Australia besuka kwinkampu yoxinaniso eKenya apho usapho lwabo lwalubalekelayo lusuka eSudan ngexesha loxinzelelo lwezopolitiko.
IKrisimesi inokuba idlulile apho ndivela khona kodwa umoya usaphila 😆Ndinombulelo kakhulu ngenye iKrisimesi nabantu endibathanda kakhulu usapho lwam. Ndiyathemba ukuba wonke umntu wase-Australia ube nosuku oluhle neentsapho zabo kunye nabahlobo. Kuwo wonke umntu obhiyozela okwangoku Merry iKrisimesi ukusuka kusapho lakwa-Akech uye kwelakho! ❤️🎄😘✨
Iposi elibiwe UAdut Akech Bior (@adutakech) kwi Dec 25, 2017 kwi-7: 59am PST
E-Australia, wamkela igama likanina, uMary kuba ootitshala kwisikolo samabanga aphakamileyo bakufumanisa kunzima ukubiza igama lakhe, Akech. Utshintshe igama lakhe kuphela xa wayeqala ukwenza imodeli.
Kwisupermodel, imbali yakhe ibalulekile kuye ebomini bakhe, Phambi kokuba ndiyenze enye into, ndiyimbacu, kwaye ndinebhongo ngaloo nto, uxelele uVogue Australia.
UAkech wafunyanwa esemncinci kakhulu eneminyaka eli-13 emva kokuba ehlisiwe yiarhente yemodeli yendawo. Waqala ukwaziswa kwihlabathi lefashoni xa wamodela ilebula yempahla ka-anti wakhe. Umsebenzi wakhe wokumodela waqala ngokusemthethweni xa wayeneminyaka eli-16 xa wayesayina kunye neChadwick Models eSydney, eOstreliya. Kungekudala wasayinwa e-Saint Laurent kwisivumelwano esikhethekileyo esimenze ukuba enze iveki yeFashoni ngeveki kwi-brand ye-SS17 eParis.
U-Adut Akech Uhamba ngeJacquemus L'Amour SS21 Show
Ngo-2017, wadibana ne-supermodel edume NoNaomi Campbell kwaye bobabini babopheleleke kakhulu kangangokuba u-Adut ngoku umbiza ngokuba ngumama wesibini. Ukuthetha ngoNahomi eGrazia mihla le, uAdut uthe, “Uza kundinika icebiso elingaka. Ukususela ngoko, ulwalamano lwethu sele lukhulile kwaye lukhulile. Yayilusapho lwam lokuqala endaba nalo eNew York. ”
Ndihlonishwe ngumama wesibini, uNaomi Campbell (R)
Ezi supermodels zimbini ziya kuba zingena ngaphakathi Beyoncé's iAlbum entsha ye-albhamu esitshixelwe ukukhutshwa ekupheleni kwale nyanga kwiDisney.
UAdut Akech Bior Intombi Ukuthembisa umsesane ibalekile imodeli yokubaleka Isandisi-lizwi